Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) Governor Dr John Panonetsa Mangudya has said Zimbabwe has one currency only, the Zimbabwe dollar, adding that there is no currency called RTGS or Nostro.
In an exclusive interview with TechnoMag, the Chancellor of the Exchequer, Mangudya was asked to shed light on the identity of the local currency since traders use various terms such as EcoCash, Nostro, Swipe, RTGS and bond, among others. Mangudya said:
Our local currency is called the Zimbabwe dollar. I always meet people who say RTGS, bond note, the local currency in Zimbabwe is called the Zimbabwe dollar.
Mangudya said the various acronyms are not a cause for concern adding: “As long as we speak the same language, I know when they are referring to the RTGS, they are talking about the Zimbabwe dollar.”
He added that foreign currencies that are being used in Zimbabwe include the US dollar, South African Rand and British Pound.
T@H 5 months ago
Haaa team ratsika madziro, hanzi hakuna RTGS 😅
It clearly demonstrate that even the authors of this useless RTGS,lack confidence on their trial and error project.
Mmh uyu atori bharanzi chete uyuzuro ndizuro hanzi huku nezizi zvakafanana then guva doko doko hanzi haa takorekitiwa huku nezizi hazvina kufanana but chinhu chimwe mmmm ndosaka vakuru venyika ino vachirambidza mbanje inhau yekuda kubhema voga
Chasura Chatibwe 5 months ago
Panonetsa zvokwadi. Toziva zvipi manje. Nhasi chakadayi mangwana chakadero. Pedzozvo moramba mashoko enyu